အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအပြန့်သရ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Near-close near-front unrounded vowel မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအပြန့်သရ (အင်္ဂလိပ်: near-close front unrounded vowel, or near-high front unrounded vowel) သည် အပြောဘာသာစကားများစွာတွင် အသုံးပြုသော သရသံ အမျိုးအစားများထဲက ပုံစံတစ်ခုဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် ⟨ɪ⟩ (အစ်[မှတ်စု ၁]) သင်္ကေတဖြင့်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အက္ခရာအသေး i ဖြစ်၏ ။ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအသင်းက ထိုအက္ခရာ၏အပေါ်အောက်၌ အစွန်းထုတ်၍ ရေးရန်လမ်းညွှန်ထားသည်။ အက္ခရာ၏ အစွန်းများ၌ အတုံးတိုလေးများဖြင့် ရေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အတုံးတိုအစွန်းများဖြင့်ရေးသားသော ဖောင့် (font) များသည် ဤပုံနှိပ်၊ ပရင့်ထုတ်သည့် စည်းမျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီပေသည်။ ၁၉၈၉ မတိုင်မီ အခြားကွဲပြားသော သရသံအက္ခရာတစ်မျိုးရှိခဲ့ရာ ထိုအက္ခရာမှာ ⟨ɩ⟩ ဖြစ်၍ ယခုအခါ၌ သဒ္ဒဗေဒအဖွဲ့က သဘောမတူ ခွင့်မပြုတော့ပေ။ သို့သော်ငြားလည်း အချို့သော ခေတ်ပေါ်အရေးအသားများ၌ ယခုထိတိုင်သုံးစွဲနေသေး၏ ။
နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအသင်း၏ လက်စွဲစာအုပ်တွင် [ɪ] အက္ခရာကို အလယ်တစ်ဝက် (mid-centralized) ၊ အရှေ့နီးပါး (close front) ၊ နှုတ်ခမ်းဖြန့် ရွတ်ဆိုရသော သရဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီး လက်ရှိ ဤအက္ခရာ ⟨ɪ⟩ ၏ တရားဝင်အမည်မှာ near-close near-front unrounded vowel (အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအပြန့်သရ) ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော ဘာသာစကားများ၌ အရှေ့နီးပါး၊ အလယ်နှင့် နီးကပ်သော အပြန့်သရ (close-mid near-front unrounded vowel) များရှိကြ၍ [ɪ] ၏ ယေဘုယျ ပြဋ္ဌာန်းစံ တန်ဖိုးထက် အနည်းငယ်နိမ့်သော အနေအထားရှိ သရ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကာလီဖိုးနီးယားတွင်ပြောလေ့ရှိသော အထွေထွေအမေရိကန်အသံထွက် (General American )၊ ခေတ်သစ် ဗြိတိသျှအများလက်ခံအသံထွက် (Received Pronunciation) နှင့် အခြားသော ဘာသာစကားများ၌ ဖြစ်သည်။ ⟨ɪ⟩ ထက်နိမ့်သော ပုံစံကို ⟨ɪ̞⟩ အဖြစ် အသံဖလှယ် ရေးသားနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရှိ sit မှ 'i' ၏ အသံဖြစ်၍ မြန်မာစကားရှိ စစ်၊ တစ် အစရှိသော စကားလုံးများမှ သရသံကို ဤအက္ခရာဖြင့် ရေးသားနိုင်သည်။ ဥပမာ "စစ်" ကို [sɪʔ] အဖြစ်ရေးသားနိုင်၍ နှာသံပါသော"စင်" ကို [sĩ] ဟူ၍ ရေးသားနိုင်သည်။
ယခုဖော်ပြပါ (ရပ်သံမပါသော) ⟨ɪ⟩ (အစ်) သရ၌ လျှာသည် ခံတွင်း၌ အပိတ်နီးပါးရှိရ၍ အပိတ်သံ အထိ မရှိရပေ။
↑ အစ် ဟူ၍ အနီးစပ်ဆုံးပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ⟨ɪ⟩ သင်္ကေတကို အစ် ဟူဆိုရာ၌ မြန်မာလူမျိုးတို့ ထွက်သကဲ့သို့ နောက်ပိတ်အသံတွင် "ရပ်သံ" (glottal stop) မပါဝင်ချေ။
↑ IPA Fonts: General Advice။ International Phonetic Association (2015)။ “With any font you consider using, it is worth checking that the symbol for the centralized close front vowel (ɪ, U+026A) appears correctly with serifs top and bottom; that the symbol for the dental click (ǀ, U+01C0) is distinct from the lower-case L (l)”
↑ Wells (1982), p. 486.
↑ Collins & Mees (2003), p. 90.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအပြန့်သရ&oldid=604148" မှ ရယူရန်
၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။